Ho an'izao tontolo izao ny fahafatesan'i Kristy ho fanavotana. Natao ho an'ny olon-drehetra izany na oviana ny fotoana na aiza ny toerana misy azy. Araka izany, miantefa amin'ny olona amin'ny fiteny sy ny kolontsaina ary ny sehatra rehetra ny filazantsara. Marnitrana ny fifandraisana tapaka vokatry ny fahasamihafana izany. Momba an'i Jesôsy ny filazantsara, dia ny amin'ny nandreseny ny fanapahana sy ny herin'ny ratsy tamin'ny fiainany sy ny fahafatesany ary ny fitsanganany tamin'ny maty. Efa maty ho antsika Izy ary velona ho antsika amin'izao fotoana izao. Tonga tety mba hanafaka antsika amin'ny famaizana noho ny ota sy ny herin'ny ota lzy, ary ho avy indray hanafaka antsika amin'izany ota izany. Maty tamin'ny fahafatesana mendrika antsika Izy mba hananantsika ny fiainana izay mendrika Azy. Hamarinina ao amin'i Kristy isika, ary hamasinina sy homem-boninahitra ao Aminy indray andro any.
Mifantoka amin'ny fiavian'i Jesôsy anankiroa ny Baiboly. Efa tonga mba hamonjy antsika Izy, any hiverina indray haka antsika ho any Aminy. Ny boky farany ao amin'ny Baiboly, ny Apokalipsy, dia nosoratana manokana mba hanomana izao tontolo ho amin'ny fiverenany. Hafatra maika ho an'izao taranaka izao izany. Hodinihintsika mandritra ity herinandro ity ny antony maha-zava-dehibe ny Apokalipsy ho an'ny olona amin'izao vanim-potoana izao. Hiarahantsika mijery ny antson'i Jesôsy ho an'ny fiangonany amin'ny andro farany mba hizara izany hafatry ny andro farany izany.